Tonga vahiny! | NewsMada
Hanamarika ny faran’ity herinandro ity ny fanombohan’ny lalao CJSOI, ho an’ny tanora U17, izay hatao eto Madagasikara. Hangotraka ny lalao satria hifampitana ny samy tanora, aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina. Anisan’ny hitarafana ny fahasalamana sy ny fandrosoan’ny firenena iray tokoa mantsy ny tanjaky ny tanora ao aminy. Efa tonga eto an-toerana ny ankamaroan’ireo firenena hiatrika izany. Tonga vahiny ny tanàna ê! Tsy ny minisitera na ny fitondrana ihany no tonga vahiny fa i Madagasikara iray manontolo.
Haja lehibe ho an’ny vahoaka, indrindra fa ny tanora Malagasy, izany mandray fifaninanana lehibe izany. Tokony haneho fahamendrehana ary handray izany am-pifaliana ny mpijery rehetra. Hahay handray vahiny, araka ny fomba efa mampalaza ny Malagasy. Hahay hanohana ny mpilalaon’i Madagasikara ihany koa.
Tsy tokony haseho ny vahiny izay mandalo ny tsy fifankahazoana sy ny olana eto amin’ny firenena, satria tonga vahiny i Madagasikara. Alao hery àry, ka hirohotra ny rehetra, hanome hery ny zanaka mandritra ny herinandro. Faniriana ny hahazoan’i Madagasikara fandresena ao anatin’ny tonga vahiny.